Klopp oo ka hadlay in Guardiola uu xalay xaadir ku ahaa Anfield ka hor kulankooda – Gool FM
Liibaan Fantastic December 28, 2016
(Liverpool) 28 Dis 2016 Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa ka hadlay in xalay Guardiola uu xaadir ku ahaa garoonka Anfield kulankii Stoke City.
Liverpool ayaa 4-gool ugu badashay dhigeeda Stoke City oo hal gool uga hormartay, Pep Guardiola ayaana la arkayay isaga oo daawanaya ciyaarta.
Man City ayaa sabtiga u safri doonta garoonka Anfield, tababare Klopp ayaana sheegay in kooxdiisu ay tahay kooxdii ugu horaysay ee Guardiola uu yimaado garoonkeeda gaar ahaan kooxaha kula loolamaya horyaalka xiliciyaareed kan.
“Waxaan maqlay in Guardiola uu xaadir ku ahaa garoonka, ma hubo inuu xaadiray garoomo badan oo kooxaha kale ah” ayuu yiri Klopp kadib guushii Stoke City.
“Tani waa cadayntii ugu horaysay ee ah in kulankeenu uu yahay mid cajiib ah, diyaar ayaan u nahay kulankaas, waa kulan ku adag labada kooxood, waxa kaliya ee ugu fiican waa in lagu ciyaarayo garoonkeena”.
“Man City waxay ciyaartaa kubadd fiican, anaguna ma nihin kuwa liita, sidaas darteed wuxuu ahaan doonaa kulan nadiif ah”.
Wakiilka Martial oo xaqiijiyay inay ka fikirayaan dalabka Sevilla